Daawo Madaxweynaha Puntland oo maanta furey Mashruuca ka soo kabashada isbedel Cilmilada Soomaaliya |
Daawo Madaxweynaha Puntland oo maanta furey Mashruuca ka soo kabashada isbedel Cilmilada Soomaaliya
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 19-1-2015 daah-furay Mashruuca Latacaalidda iyo kasoo Kabashada Isbedelka Cimilada Soomaaliya.
Shirweynahakani lagu daah furayey mashruucani oo ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland, ayaa waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay wasiiro katirsan maamulka Puntland, masuuliyiin ka socday Hay’adaha ka howlgala gudaha Puntland, wafdi ka socday maamulka Federaalka Soomaaliya, Gudoomiyaasha Gobolada iyo Degmooyinka Puntland qeybtood iyo marti sharaf kala duwan oo ka socday bulshada rayidka ah.
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey madashii shirweynaha ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay in maanta uu daah-furay Mashruuca Latacaalidda iyo kasoo Kabashada Isbedelka Cimilada Soomaaliya.
‘Maamulka puntland si qoto dheer ayey ula socotaa in cimilada isbadalaysa ay tahay mid kamid ah khataraha daran ee soo wajahay dunida, khatartani ma’ahan mid dhib ku ah deegaanka oo keliya, laakiin waxaa ay helis ku tahay amniga qaranka, amniga dunida, dhaqaalaha iyo saboolnimada dunida ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
” Waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego GEF, UNDP iyo maamulka Federaalka Soomaaliya inaanu ku faraxsanahay in aanu helno mashruucii ugu horeeyey ee ku aadan isbedelka cimilada, baahina loo qabo in la soo balaariyo fikradaha noocaan oo kale ah” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas
Dhinaca kale Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in maamulka Puntland ay ka go’antahay in si buuxda ay uga qeyb qaadato arrimaha waxkaqabashada isbedelka cimilada iyo maareynta deegaanka Soomaaliya.